Uda nke ụlọ ya game. Ọ dịghị otu ma ọ bụ abụọ ma na ise ize Omuma Blackjack Gold MH usoro. Dị ka akụkụ nke Gold usoro si Microgaming, i nwere ike na-atụ anya niile brisk gameplay, magburu onwe animations na ụda.
The Classic Blackjack MH egwuregwu ndị a bụ otu ihe ahụ iwu nke European version. The ode-akpata bụ na ọ na-keere na 5 ọkọlọtọ redio nke 52 kaadị kama na- 2 redio. Ọ bụ ezie na ọ na-enye a iche ulo ihu, ihe ọkpụkpọ nwere okomoko nke ịkụ nzọ dị elu 5 aka maka otu ndibiat. The Dealer nwere ka otu aka na-egwu. Ọ pụtara mma Ohere nke na-emeri.
Enwekwa na nkọwa na kwee efọd, Classic Blackjack Gold MH nwere stampụ nke Microgaming nile ọ. The ọkpụkpọ na-dị ezi uche ndịna, ọdịyo na video mmetụta nke ahụ bụ ndụ n'ezie dị ka o kwere omume. Ngwa ngwa paced juru n'ọnụ na atụmatụ, a ga-ekwe ka ị na-enwe ata cha cha emetụta nri n'ebe obibi unu.
Ikwe Player ngụkọta akara n'elu egwuregwu, i nwere ike inwe ihe dị iche iche na mkpụrụ ego nzo dị. malite site 1 otuto ruo 200, ị pụrụ ime ka a nzọ, re-nzọ ma ọ bụ doo anya ya. na 5 aka e nwere maka otu egwuregwu nwalee dị iche iche na azum na di ntakiri nzo ka a na-emeri ohere.
Play Classic Blackjack Gold MH n'ihi ata edinam na obi ụtọ. N'ụzọ dị irè na-akpọ ise egwuregwu kama otu, enwetaghị niile fun na-enweta nkwanye ebe a.
• Insurance: akwụ 2:1
• Number nke redio: 5, 52 kaadị onye ọ bụla
• Oghere Kaadị: No
• Multi Hand: Ee
• Ebe E Si Nweta Mgbawa nzọ nso - 1 to 200
• Dealer Akwụrụ on 17: Ee
• Ugboro abụọ Down: Na na a siri ike uru nke 9, 10, 11
• Kewaa: Ee
• Re-gbawara n'etiti: No
• Split Aces: Ee
• Autoplay: Ee
classic Blackjack | Mobile Casino na Online Style!